ललितपुरका व्यापारिक समुदायले बुधबार राति मंगलबजारमा निकालेको भीमसेन जात्रा । वर्षेनि हुने गरेको यो जात्रा २०७२ सालको भूकम्पपछि पहिलो पटक निकालिएको हो । तस्वीरः उजोल डंगोल⁄काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुधबार छुट्टाछुट्टै भेट गर्दै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ। तस्वीर सौजन्यः राष्ट्रपति र प्रम कार्यालय
कस्को होला ?
सातदोबाटोस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा जथाभावी फालिएका सर्वसाधारणका सवारीसाधन। तस्वीरः दिनेश श्रेष्ठ⁄काठमाडौं
बलिउडका ख्यातिप्राप्त अभिनेता प्रेम चोपडा राजधानीमा। बौद्धस्थित होटल हायात रिजेन्सीको निम्तोमा पत्नीका साथ आइतबार नेपाल आएका दरबारमार्गको राइजिङ मलस्थित क्युज सिनेमाका सञ्चालक मित्रको निम्तोमा सो हलमा पुगेका थिए।
कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा । तस्वीरः उजोल डंगोल⁄काठमाडौं
नेवार समुदायले परम्परादेखि मनाउँदै आएको ‘रोपाइँ जात्रा’ हाँडीगाउँमा मनाउँदै नेवार समुदाय । तस्वीरः उजोल डंगोल⁄काठमाडौं
सात सय वर्षअगाडि लुप्त भएको दक्षिण पश्चिमी अमेरिकी प्राचीन शहर। उक्त पुरातात्त्विक शहरको अवशेष कोलोराडोको मेसा वेर्डे नेसनल पार्कमा रहेको छ।
ललितपुरमा बुधबार मतयाः
पर्वको अवसरमा निकालिएका झाँकी। तस्वीरः उजोल डंगोल÷काठमाडौं
गाईजात्राको अवसरमा आफ्ना दिवंगत आफन्तको सम्झनामा मंगलबार राजधानीमा निकालिएको एक झाँकी । तस्वीरः नेस
राजधानीको कीर्तिपुर नगरपालिका र विभिन्न निकायबीच सोमबार एक समारोहकाबीच आपसी सहयोग आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। तस्वीरमा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन र त्रिविको भू–विज्ञान विभागका प्रमुख प्राडा लालुप्रसाद पौडेल
साइबेरियामा माछा मार्दै रुसी राष्ट्रपति पुटिन (तस्विरमा हेर्नुहोस)
लामो गर्मी बिदामा निस्केका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन साइबेरियामा माछा मारिरहेको फोटो सार्वजनिक भएको छ। कायाकिङ र पौडीमा शौखिन राष्ट्रपति पुटिन गर्मी बिदा मनाउने क्रममा रूसका रक्षामन्त्री सर्गेई शूइगूको साथमा
चोभारमा शनिबार बाख्रा चराउँदै एक वृद्धा। तस्वीरः रवि महर्जन, काठमाडौं
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै पूर्वप्र्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की। तस्वीरः नेस
युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई शहरमा रहेको विश्वकै अग्लोमध्येको एक ८६ तले आवासीय भवनमा शुक्रबार बिहान १ बजे एक्कासि लागेको आगो। आगलागीबाट १ हजार १ सय फुट अग्लो टर्च टावर
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार हेलिकोप्टरबाट मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डमा ओर्लिएपछि स्थलगत निरीक्षण गर्दै ।
नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी सोमबार राजधानीको धर्मकीर्ति विहारमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै। सो अवसरमा राजदूतले भारतले सो विहारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो।
पछिल्लो समय कृषिलगायत उत्पादनका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोग बढे पनि परम्परागत रूपमा यसरी काठ चिर्ने काम गरिरहेका मानिसहरू गाउँघरमा भेटिनु नौलो कुरा होइन। तस्वीरः कविराज नेपाल⁄पाल्पा
आज शुक्रबार परेको रक्षा बन्धनका लागि असनमा राखी किन्दै महिला। तस्वीरः उजोल डंगोल⁄नेस
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय आसम राइफलका डाइरेक्टर जनरल, शोकिन चौहान प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसँग सैनिक मुख्यालयमा भेट गर्दै । तस्वीरः नेस
नेवार समुदायले घर शान्तिको कामना गर्दै घण्टाकर्ण धपाउने प्रचलनअनुसार गठामुगः पर्व शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । तस्वीरः उजोल डंगोल⁄काठमाडौं